खुमबहादुरलगायत चार नेता, जसको राजनीति सकियो !
ARCHIVE, NEWSPAPER, POLITICS » खुमबहादुरलगायत चार नेता, जसको राजनीति सकियो !
(क) अठार बर्ष उमेर पूरा भएको,
शुद्धीकरण गर्न व्यवस्था
‘पछिल्लो समय राजनीतिप्रति मान्छेहरूमा वितृष्णा पैदा भएको छ । राजनीति विशुद्ध समाजसेवा हो भन्ने भावना जनतामा जागृत गराउन आवश्यक थियो । यही सोचमा हामीले कडा व्यवस्था गरेका हौँ । कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर यस्तो व्यवस्था गरेका होइनौँ । नकारात्मक राजनीति रोक्न र राजनीतिक शुद्धता कायम गर्न, राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता समाजमा सम्मानित हुने वातावरण निर्माण गर्न सर्वसम्मतिले कानुनी व्यवस्था गरेका हौँ । यो आवश्यक पनि थियो ।’ -आनन्दप्रसाद ढुंगाना, उपसमिति संयोजक
‘राजनीतिक दल र लोकतन्त्र दुवैको शुद्धीकरणलाई सँगसँगै लैजान आवश्यक छ । राजनीतिक दलबाटै शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ । भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएकालाई दलको सदस्यबाटै रोकेर पार्टीको पनि शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ ।’ – रामेश्वर फुँयाल, एमाले सांसद
दोषीलाई सुरुमै रोक्नुपर्छ
‘राजनीतिमा कसैलाई आरोप लाग्दैमा रोक्ने भन्ने होइन । तर, अदालतबाटै प्रमाणित भएका र राजनीतिलाई नै भ्रष्टीकरण गर्न खोज्नेहरूलाई सदस्यता नदिएर दलहरूको पनि शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो । दलहरूप्रति हुने नकारात्मक टीका–टिप्पणी रोक्न र शुद्धीकरण गर्न तथा नैतिकतासहितको राजनीति अगाडि बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । दलको सदस्य हुनु भनेको भोलि पार्टी अध्यक्ष पनि बन्नु हो । दोषी व्यक्तिलाई सुरुमै रोक्नुपर्छ भन्ने नै उद्देश्य हो ।’ – रेखा शर्मा, माओवादी सांसद